Mibilaogy hatry ny fahazaza: Atrikasa bilaogy eny an-tsekoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2018 11:20 GMT
Ny Planina Ceibal dia fandaharan'ny governemanta Orogoaiana hanome solosaina OLPC ho an'ny ankizy 6 hatramin'ny 11 taona (miisa 350.000) any an-tsekoly. Ahitana fidirana aterineto amin'ny wifi any an-tsekoly sy ny toeram-bahoaka ny fotodrafitrasa vao avy namboarina.
Pablo Flores nanoratra momba ny hevitra ambadiky ny tetikasa “Mibilaogy Fony Fahazaza”:
Milaza ny fiantraikan'ny vatsy ara-bola avy amin'ny Rising Voices tamin'ny tetikasa Blogging Since Infancy [Mibilaogy Hatry ny Fahazaza] i Pablo:
Tamin'ny taona 2008, natsangana ny fiarahamonina CeibalJAM mba hianarana bebe kokoa momba ny teknolojian'ny Planina Ceibal ary hanampy amin'ny fampivelarana ny rindrambaiko ho an'ny solosaina finday OLPC [Solosaina-Finday Iray isan'Ankizy]. Natsangana niaraka tamin'ny fanohanana ara-virtoaly sy ara-bola izany, mifototra amin'ny ezaky ny mpilatsaka an-tsitrapo. Nikarakara fihaonana ara-potoana ny CeibalJam ary natao tamin'ny volana lasa ny hetsika fahafito.
Nahazo loka Prix Ars Electronica 2010 tao amin'ny sokajy fiarahamonina nomerika ny CeibalJAM. Iray amin'ireo loka lehibe indrindra teo amin'ny tontolon'ny kolontsaina nomerika ny Prix Ars Electronica.
Nitantara momba ny loka tamin'ny fifaninanana bilaogy izahay ary avy eo nanasongadina ireo bilaogy sasany nandresy (Fizarana 1, Fizarana 2)
Nahitana fianarana momba ny fampiasana ny bilaogy ho fianarana, fanitsiana lahatsary ary talenta hafa amin'ny isan-tsekoly nandresy ny sasany amin'ireo loka. Tamin'ny Asabotsy 17 Aprily, nandray anjara tamin'ny atrikasa roa momba ny bilaogy ireo ray aman-dreny, mpampianatra sy mpianatra ao amin'ny Escuela 93 de Maldonado – (Sekoly 93, Maldonado), atrikasa notarihan'i Diego F. Eng Roselli sy ilay mpampianatra Mariana Herrera. Ireto ny sasany tamin'ireo sary nandritra ny atrikasa.